Kunivhesiti yeKalifornia Zvikoro Zvakaenzaniswa uye Zvichienzaniswa
Zvikoro Zvipfumbamwe zveUC zveVa Undergraduates
California ine imwe yepamusoro yenyika yunivhesiti yenyika munyika (uyewo imwe yeiyo inodhura zvikuru), uye zvitatu zvezvikoro pasi apa zvakagadzira mapeji edu emasunivhesiti makuru evanhu . Aya mapfumbamwe emayunivhesiti anopa zvidzidzo zvepasikiriyasi akanyorwa apa kubva kune yakaderera kusvika pakuwedzerwa kwepamusoro. Ramba uchiyeuka kuti kubvuma kutora hakusi kureva kuratidza kwakarurama kwesarudzo. Tevera purogiramu yehupfumi kuti uwane dhepfenyuro yakabatana nemitemo yekugamuchira, mari, uye rubatsiro rwemari.
Cherechedza kuti urongwa hweUC hune mapfumbamwe emasasa, kwete mapfumbamwe akanyorwa pasi apa. Sani Francisco anewo yeYunivhesiti yeKalifornia, asi yakatsaurirwa kuti iite zvidzidzo uye naizvozvo haisati yakabatanidzwa munyaya iyi.
Yunivhesiti yeKalifornia Berkeley. Charlie Nguyen / Flickr
Kwete Yunivhesiti yeCalifornia Berkeley yakakosha pamusoro pezvenyu dzezvikoro zveUC, inotora kuwana nzvimbo ye # 1 munyika kuitira zvikoro zvese zvevanhu. Kuti vapinde, vashandi vachada chikwata uye maitiro akaenzana ekuedzwa anowanikwa pamusoro pemakore. UC Berkeley akaita mapeji edu emayunivhesiti makuru evanhu , mapurogiramu gumi ekugadzirwa kweunyanzvi , uye zvikoro gumi zvepamusoro zvebhizimisi . Yunivhesiti inowirirana muCAAA Division I Pacific 12 Conference .
Acceptance Rate (2016): 17%
Kunyoresa: 40 154 (29 310 vasiri pasi pekudzidza)
Ongorora Campus: UC Berkeley photo tour
Kubvuma: Berkeley GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekugamuchira, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, chengetedza ruzivo rweBerkeley
Royce Hall kuUCLA. Photo Credit: Marisa Benjamin
UCLA inenge ichitsvaga ichiwanikwa inowanikwa pakati peyunivhesiti 10 yepamusoro yevhidhiyo, uye masimba ayo akareba masimba kubva kune zvigadzirwa kusvika kune unyanzvi. Yunivhesiti yemitambo yemitambo inopikisana muCAAA Division I Pacific 12 Conference.
Acceptance Rate (2016): 18%
Kunyoresa: 43,548 (30873 undergraduates)
Ongorora Campus: UCLA photo tour
Admissions: UCLA GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekubvuma, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, tarisa humwe hutano hweUCLA
Geisel Library kuUCSD. Photo Credit: Marisa Benjamin
UCSD inogara iri pakati peyunivhesiti inonyanya kukosha yehurumende , uye inowanzoitawo mapepa ezvirongwa zvakanakisisa zvehujini . Yunivhesiti iri kumusha kunonyanya kuonekwa Scripps Institute of Oceanography UCSD mauto anoshamwaridzana paNationalAA Division II.
Acceptance Rate (2016): 36%
Kunyoresa: 34 979 (28 127 pasi pedduates)
Ongorora Campus: UCSD Photo Tour
Kubvuma: UCSD GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekugamuchira, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, chengetedza uhu hweUCSD
UCSB, Yunivhesiti yeKalifornia Santa Barbara. Carl Jantzen / Flickr
Nzvimbo yakashata yeUC Santa Barbara yakawana nzvimbo pakati pezvikoro zvakanakisisa zvevadikanwi vemhenderekedzo yegungwa , asi vadzidzidzo vanewo simba. UCSB ine chitsauko cheP Phi Beta Kappa Hon Society inoshandisa simba rayo mune zvigadzirwa zvemasimba uye sciences, uye iyo nhengo yeChichi yeAmerican Universities nokuda kwesimba rekutsvakurudza. IUCSB Gauchos inokwikwidza muCAAA Division I Big West Conference.
Kunyoresa: 24 344 (21,574 pasi pedduates)
Kubvuma: UCSB GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekubvuma, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, tarisa uhu huno hutano hweUCSB
Frederick Reines Hall paUC Irvine. Photo Credit: Marisa Benjamin
UC Irvine ane simba rakawanda redzidzo rinowedzera zvakasiyana-siyana zvedzidzo: biology nehutano sciences, kupomerwa mhosva, English, uye psychology kutumidza vashomanana. Yunivhesiti yemitambo yemitambo inopikisana muCAAA Division I Big West Conference.
Acceptance Rate (2016): 41%
Kunyoresa: 32 754 (27 331 pasi pedduates)
Ongorora Campus: UC Irvine photo tour
Admissions: UC Irvine GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekugamuchira, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, chengetedza UC Irvine profile
Mondavi Centre yeChirongwa cheChirongwa cheChirongwa paUC Davis. Steven Tyler PJs / Flickr
UC Davis ane mazana mazana mashanu emakiromita mashanu, uye chikoro chinowanzoita zvakanaka muhuwandu hwevadzidzi vemayunivhesiti. Sezvimwe zvikoro zvezvikoro, UC Davis anokwikwidzana neCNAA Division I Big West Conference, uye simba rezvidzidzo rakapa yunivhesiti chitsauko cheP Phi Beta Kappa Hon Society uye nhengo yeChechi yeAmerican Universities.
Acceptance Rate (2016): 42%
Kunyoresa: 38 460 (29 379 pasi pedduduates)
Admissions: UC Davis GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekubvuma, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, chengetedza uwandu hweUC Davis
Yunivhesiti yeCalifornia Santa Cruz Lick Observatory paGomo reHamilton. the_tahoe_guy / Flickr
Nhamba inoshamisa yevadzidzi vanoenda kuUC Santa Cruz vanoenda kundowana vanachiremba vavo. Iyo musasa inotarisa kuMonterey Bay nePacific Ocean, uye yunivhesiti inozivikanwa nokuda kwekudzidza kwayo inoenderera mberi.
Acceptance Rate (2016): 58%
Kunyoresa: 18 783 (16 962 pasi pedduates)
Admissions: UC Santa Cruz GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekugamuchira, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, chengetedza mufananidzo weUCSC
Botanic Bindu paUC Riverside. Matthew Mendoza / Flickr
UC Riverside ine musiyano wekuve mumwe wevanyori vemarudzi akawanda ekutsvakurudza munyika. Purogiramu yebhizimisi yakakurumbira zvikuru, asi mapurogiramu akasimba echikoro mune hutongi hwemaoresi uye masayenzi akazviwana chitsauko cheChristian Beta Kappa Hon Society. Vadzidzi vechikoro vechikoro vanokwikwidza muNational Division yeIg West West Conference.
Acceptance Rate (2016): 66%
Kunyoresa: 22 715 (19.799 pasi pedduduates)
Admissions: UC Riverside GPA uye Test Score Graph
Kuti uwane mamwe mvumo yekugamuchira, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, chengetedza UC Riverside profile
University of California Merced. Russell Neches / Flickr
UC Merced ndiyo yekutanga yunivhesiti yekutsvaga yunivhesiti yemakore rechi21, uye yunivhesiti yekuvaka-ye-ye-art yakagadzirirwa kuva nehuwandu hwehupenyu hwehupenyu. Bhizinesi, sainzi, uye masayenzi emasayendisiti mashoma anozivikanwa zvikuru pakati pevadzidzi vepasi.
Acceptance Rate (2016): 74%
Kunyoresa: 7 336 (8 815 undergraduates)
Admissions: UC Merced GPA uye Test Score Grafu
Kuti uwane mamwe mvumo yekugamuchira, mari uye mari yekubatsira rubatsiro, chengetedza UC Merced profile
Kana uri kuronga kushanda kune imwe yeYunivhesiti yeCalifornia zvikoro, iva nechokwadi chekuverenga idzi mazano emibvunzo 8 yeUC Personal Insight . Uyewo, unogona kuwana manzwisisiro ekuti iwe unofanirwa sei pamakambani akasiyana ane zvienzanidzo zveUC SAT scores uye UC ACT chikoro .
Mifananidzo yeIrish-Shona Grammar
6 Zvechokwadi Zvechokwadi Mabhuku
Japanese-American Internation kuManzanar MuHondo Yenyika II
Vaduku Vanokunda paLPGA Tour
Complete List of College Soccer National Championship Teams
Motokari Injini Radiators Inoda Kuti Ive Yakanyanyisa, Kwete Mvura Yese
Kunyora Tsamba Yechipfupa kuSangano reTalent
Vatapi venhau Vanofanira Kuva Nechinangwa Kana Kutaura Chokwadi?
The Affirmative Action Debate: Matambudziko Matatu Okufunga
Hondo ye1812 101: An Overview
Kutyisa, Blitzkrieg uye Kupfuura - Kutonga kweNazi Kupfuura Poland
Ndezvipi Zvine Zvokuchengetedza Zvakatipoteredza, Zvokugara Mumaruwa?
Chii Chisiyana Pakati peMisa neBhuku?
Rongedza Basa Rako Rokuumba Nawo Rakanyorwa Mifananidzo
Scripps College GPA, SAT uye ACT Data
Ndechipi musiyano pakati pemweya, mupoltergeist uye kunyangadza?
Vatungamiri vekutanga veAmerica
Nzira Yokunyora Sei Peji 10 Yokutsvaga Peji
Kurumidza Kuita Sei RC Cars Zvichienda?
Nyika dzeCentral America
Nzira Yokufananidza "Mener" (Kutungamira)
Kuona uye Mazano Okugadzira Maonero Echokwadi
Revolutionary Heroes yePhilippines